बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ | गृहपृष्ठ
Home अर्थान्तर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८
on: २७ श्रावण २०७४, शुक्रबार १६:०४ अर्थान्तर
निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, कानून महाशाखा
रामहरि न्यौपानेको जन्म २०२२ सालमा सर्लाही जिल्लामा भएको हो । उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट कानूनमा स्नातक र जनप्रशासन क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका छन् । न्यौपानेले करीब २८ वर्ष बैङ्किङ क्षेत्रमा रहेर अनुभव प्राप्त गरिसकेका छन् । उनी विगत ३ वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैङ्क, कानून महाशाखाको प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् ।
आपसी समन्वयको आवश्यकता
नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतप्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ५ लाख वा सोभन्दा बढी ऋण असुली गर्ने प्रयोजनका लागि २०६० असार २ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ लागू भएको हो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ पनि जारी भएको छ । ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापना २०६० साउन ०१ गते भएको हो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दाहरू छिटोछरितो ढङ्गबाट कारबाही र किनारा गरी ऋणीबाट लिनुपर्ने ऋणको साँवा तथा ब्याज रकम असुलउपर गर्ने व्यवस्था गर्न यो ऐन तथा नियम जारी गरिएको हो । न्यायाधिकरणको स्थापना भएपश्चात् बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जाको अनुपातमा समेत कमी आएको छ । आव २०६२/०६३ मा ‘क’ वर्गका बैङ्कको निष्क्रिय कर्जा १४ दशमलव २२ प्रतिशत रहेकामा आव २०७२/७३ मा १ दशमलव ८१ प्रतिशतमा झरेको छ । आव २०६२/६३ मा ‘ख’ वर्गका विकास बैङ्कको निष्क्रिय कर्जा ५ दशमलव २९ प्रतिशत रहेकामा आव २०७२/७३ मा १ दशमलव ४८ रहेको छ ।
न्यायाधिकरणको स्थापना भएपश्चात् देशको वित्तीय क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा सकारात्मक प्रभाव पर्न जाने अपेक्षा गरिँदै आइएको हो । ऐनको कार्यान्वयन पक्ष बलियो भएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दाहरूको कारबाहीमा देखापरेका समस्याहरू छिटो तथा सरल रूपमा समाधान हुने र सरकारी राजस्वमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान अझ बढ्नेछ ।
न्यायाधिकरणमा कानून सदस्य, बैङ्किङ सदस्य र लेखा सदस्य गरी तीन सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । यसमा कानून सदस्यले न्यायाधिकरणको अध्यक्षता गर्नेछन् । न्यायाधिकरणमा प्रचलित कानूनबमोजिम अदालतलाई भएसरहको अधिकार छ । न्यायाधिकरणको निर्णय÷आदेशउपर चित्त नबुझाउने पक्षले क्रमशः ऐनको दफा १९ तथा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीसमक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
न्यायाधिकरणले २०६० भदौ ३० गतेबाट ऋण असुलीका मुद्दाहरू हेर्न थालेको हो । ५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी साँवा रकमसँग सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीसम्बन्धी नेपाल राज्यभरका मुद्दाहरूको शुरू कारबाही तथा किनारा गरी त्यस्ता ऋणीको अन्य सम्पत्तिसमेतबाट भराइदिने अधिकार यस न्यायाधिकरणलाई प्राप्त छ । ५ लाखभन्दा कम साँवा रकमको शुरूको कारबाही तथा किनारा भने सम्बन्धित जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।
ऋण असुली अधिकृतले सुरक्षा निकायको सहयोग लिई धितोमा रहेको चलअचल सम्पत्ति कब्जा गर्ने, नियमानुसार मूल्याङ्कन गर्ने, लीलामी गर्नेलगायत परिस्थिति हेरी ऋण असुलीका लागि ऋणी र जमानत दिने व्यक्तिसमेतलाई थुनामा राखी कारबाही अगाडि बढाउन सक्छ । यस स्थितिमा ऋण असुली अधिकृतले सम्बन्धित व्यक्ति/जमानी बस्नेलाई कति दिनसम्म थुनामा राख्ने र सो अवधिको सिधा खर्च कसले कतिका दरले बेहोर्नुपर्ने हो भन्ने बारेमा यो ऐन मौन रहेको छ ।
न्यायाधिकरणबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको उजुरी–निवेदनमा सुनुवाइ भई ऋणी तथा जमानत दिनेबाट ऋण असुल गराइदिने निर्णय भएपछि सोको लिखित जानकारी स्रेस्तेदारद्वारा ऋण असुुली अधिकृतलाई गराउने गरिन्छ र कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ । तथापि चित्त नबुझाउने पक्षले पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्ने समयसम्म पर्खनुपर्ने हुन्छ । इजलाशले ऋण असुली अधिकृतलाई ठहरेको रकम ऋणीबाट सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई असुलउपर गराइदिन सामान्यतया ४/५ महीनाको समयावधि तोक्ने गरेको छ । त्यस सन्दर्भमा धितो रहेको चलअचल सम्पत्ति कब्जा गर्न सरकारी सुरक्षा निकायको सहयोग यथासमयमा नपाइने, सम्बन्धित घरमा बसिरहेका मानिसहरूलाई घर खाली गर्न लगाउनुपर्ने, मौजुदा धितोको लीलाम विक्रीबाट रकम असुलउपर हुन नसक्ने, वादी बैङ्कले नै विपक्षी ऋणीको थप धितो देखाउन नसक्ने इत्यादि अवरोधहरू आइरहेको देखिन्छ ।
न्यायाधिकरणको कार्यप्रणालीभित्र मिलापत्र हुन सक्ने प्रावधान पनि रहेको छ । तर, दुवै पक्षलाई राखी मिलापत्र गराउनु निकै नै चुनौतीपूर्ण काम हो । ऋणी र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीबीचको मिलोमतोमा धितोको वास्तविक मूल्यभन्दा अत्यधिक मूल्याङ्कन गराई ऋणीले ऋण लिएको, अचल सम्पत्तिको धितो नै नलिई कर्जा प्रदान गरेको, निवेदकले ऋणी र जमानत दिने व्यक्तिको सम्पत्ति न्यायाधिकरणलाई देखाई सहयोग गर्न नसकेको, वादीले नै प्रतिवादीको ठाउँ ठेगाना पत्ता लगाउन नसकेको, खोला पसेको/सरकारी अधिग्रहणमा परिसकेको जग्गा धितो लिएको, ऋणी कम्पनी नै बन्द भइसकेको, ऋणी विदेशिएर जमानत दिने अन्य कोही पनि नभएको, व्यक्तिगत जमानी दिने विदेश फरार भइसकेको, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत जमानी लिनयोग्य व्यक्तिको जमानी नलिएको इत्यादि कारणवश न्यायाधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ परेको देखिएको छ । ऋण असुलीसम्बन्धी उजुर–निवेदन दिनुअघि गर्नुपर्ने पूर्वशर्त पूरा भएको नभएको न्यायाधिकरणले हेर्नुपर्ने भएकाले यस्तो कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ ।
निवेदकका रूपमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मात्र न्यायाधिकरणमा प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कुनै बैङ्कले उसका ऋणीलाई गरेको अन्यायपूर्ण व्यवहारका बारेमा ऋणीसमेत न्यायाधिकरणमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकेमा न्यायाधिकरणको प्रभावकारिता अझै बढ्न सक्ने हुन्छ । त्यसैले पनि आगामी दिनमा ऋण असुली न्यायाधिकरण तथा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले प्रभावकारी रूपमा यस क्षेत्रमा कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
ऐनको समग्र अवस्था र सुधार
श्यामकुमार खत्री, अधिवक्ता
नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को पृष्ठभूमि कस्तो छ ?
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी छाता ऐन, २०६३ आउनुअघि नेपालमा बैङ्किङसम्बन्धी विभिन्न कानून थिए । वाणिज्य बैङ्क ऐन २०३१, कृषि विकास बैङ्क कृषि विकास बैङ्क ऐन २०२४, वित्त कम्पनी ऐन २०४२ , विकास बैङ्क ऐन २०५२ र औद्योगिक विकास निगमसम्बन्धी ऐन २०४२ । यी सबै ऐनमा बैङ्क सञ्चालन, कर्जा प्रवाह र असुलीसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाहरू थिए । तर, धितोबाहेकबाट असुली गर्न छुट्टै व्यवस्था थिएन । त्यसैले मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको महलअनुसार कर्जा असुलीका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा गर्नुपर्ने अवस्था थियो । नेपालका ठूला बैङ्कहरू राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र नेपाल बैङ्क लिमिटेडमा सरकारी हस्तक्षेपलगायत विविध कारणले घाटामा जान थाले । त्यस्तै जनयुद्धताका बैङ्कका ग्रामीण शाखाहरू शहरमा गाभिए । व्यापार व्यवसायमा आएको कमीले कर्जा असुलीमा समस्या आउन थाल्यो । ती समस्या निराकरण गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली सहज गराउने उद्देश्यले छुट्टै ऐन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ निर्माण भई २०६० असार २ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रारम्भ भएको हो । ऐनको दफा १५ अनुसार यो ऐन प्रारम्भ हुँदा भाखा नाघिसकेका कर्जा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ३ वर्षभित्र र ऐन प्रारम्भ भएपछि भाखा नाघेका कर्जाको हकमा त्यसरी भाखा नाघेको मितिले तीन वर्षभित्र असुलीको उजुरी निवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । पछि हदम्यादमा वृद्धि गरी क्रमशः ५ र ४ वर्षभित्र असुलीको उजुरी निवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसर्थ, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खराब ऋण असुली गर्ने उद्देश्यका साथ यो ऐन प्रारम्भ भएको हो ।
ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन लागू भएपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली न्यायाधिकरण र पुनरावेदन ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना भई आफ्ना दैनिक काम कारबाही भइरहेको छ । बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्दा लिएको धितो लीलाम विक्री गरी त्यसबाट असुली अपुग भएमा र विविध कारणले धितो लीलाम नभएमा ऋणी तथा जमानीको अन्य चलअचल श्रीसम्पत्तिबाट असुली गरी पाऊँ भनी वित्तीय संस्थाहरूले न्यायाधिकरणसमक्ष उजुरी गर्ने गर्छन् । न्यायाधिकरणले त्यसरी पर्न आएका उजुरीमा आवश्यक प्रमाणसमेत बुझी, वादी प्रतिवादीको कुरा सुनी निर्णय गर्ने गरेको पाइन्छ । निर्णयहरू मात्र हेर्दा झण्डै ९९ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दामा बैङ्कको साँवाब्याज ऋणीबाट असुल नभएमा जमानीबाट असुल हुने गरी मुद्दा फैसला भएका छन् । ती फैसला कार्यान्वयनका लागि छुट्टै असुली अधिकृतको व्यवस्था गरिएको छ । असुली अधिकृतले प्रतिवादीको सम्पत्ति पत्ता लागेको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्ति लीलाम गरी बैङ्कहरूको साँवाब्याज असुलउपर गराइदिइरहेको छ । त्यसैले ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।
ऐन पुरानो भएको जस्तो लाग्दैन ?
नेपालमा पछिल्लो समयमा बाहिरी प्रभावबाट कानून बन्ने परिप्रेक्षमा यो कानून पुरानोजस्तो लाग्छ । तर, कानून त्यसरी पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै र नयाँ बनाउँदै जाने परिपाटी राम्रो होइन । भारतमा अहिलेको करार कानून हेर्ने हो भने सन् १८७२ को (ल अफ कण्ट्र्याक्ट) चलिरहेको छ । त्यसरी हेर्दा नेपालको यो ऐनलाई पुरानो भन्न मिल्दैन । यसमा भएका केही कमीकमजोरीलाई पक्कै सुधार्दै लैजानुपर्छ । कमीकमजोरी सुधार्ने नाउँमा नयाँ कानून ल्याउने होइन । यसै कानूनलाई सुधार गर्नु बढी उपयोगी हुन्छ ।
ऐनमा संशोधन कुनकुन बु“दामा गर्न आवश्यक छ ?
वित्तीय संस्थाहरूको ऋण असुली गर्ने, गराउने पक्षबाट हेर्दा यो ऐनमा सुधार गर्न नितान्त जरुरी छ । कर्जा प्रवाह गर्दा जमानीको भर परी कर्जा प्रवाह गरिने हुँदा असुली गर्दा ऋणी र जमानीलाई समान तहमा राखी असुली गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । बैङ्कको कर्जा असुली हुने ठहर भएको अवस्थामा न्यायाधिकरण आफैले नेपाल राज्यभित्र ऋणी तथा जमानीदाताको सम्पत्ति पत्ता लगाई असुली गरिदिनुपर्ने ठोस व्यवस्था ऐनमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ । निर्णय कार्यान्वयनमा पुनरावेदनको म्याद कटेपछि स्वतः न्यायाधिकरणबाट कारबाही अगाडि बढाउने व्यवस्था हुन जरुरी छ । उजुरी निवेदन दर्ता गरिसकेपछि मुद्दा अगाडि बढाउन वारेस राख्ने प्रचलन पूर्णरूपमा हटाउनुपर्ने हुन्छ । न्यायाधिकरणको शाखा कम्तीमा सातै प्रदेशमा हुनुपर्छ । वित्तीय संस्थाका कर्मचारी र ऋणीको मिलेमतोमा कर्जा प्रवाह भएको हो भने त्यस्ता ऋणी तथा कर्मचारीलाई आवश्यक कारबाहीको सिफारिश गर्न सक्ने अधिकार ऐनमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
कर्जा असुलीका लागि ऋण असुली न्यायाधिकरणमा निवेदन परेपछि कर्जाको सम्पूर्ण विवरणबारे जानकारी हुन्छ । त्यस अवस्थामा कतिपय कर्जा बैङ्क कर्मचारीको कमीकमजोरीका कारण प्रवाह भएको देखिन्छ । त्यस्तो देख्दादेख्दै पनि ती कर्मचारीहरूलाई सजाय गर्ने अधिकार ऋण असुली न्यायाधिकरणलाई छैन । त्यसैले बैङ्किङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी ऐन, २०६४ र ऋण असुली ऐन, २०५८ लाई मर्ज गरी एकीकृत रूपमा बृहत् अधिकार भएको ऋण असुली न्यायाधिकरण ऐन बनाउनुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता हो । त्यसरी बृहत्तर क्षेत्राधिकार भएको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली न्यायाधिकरण बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
ऋणीको धितोबाट कर्जा असुल हुन नसक्दा कैदको व्यवस्था एकदमै न्यून छ । किन ?
वित्तीय संस्था र ऋणीबीचको बैङ्किङ कारोबार नितान्त एउटा लेनदेनअन्तर्गत मानिन्छ । रीतपूर्वक प्रवाह भएको कर्जा ऋणीले जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो, सोही प्रयोजनमा खर्च गरेमा त्यस्तो कर्जा वैध मानिन्छ । त्यस्तो वैध कर्जा ऋणीले तिर्न नसक्नुका कारण व्यापार व्यवसाय बिग्रनु, दैवी विपत्ति पर्नु रहेको छ भने त्यो व्यक्तिको अपराध होइन । त्यसैले गर्दा ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट मुद्दा फैसला भई ऋणीले तिर्नुपर्ने भएमा ऋणी र जमानीदातासँग सम्पत्ति छैन भने त्यस्तो ऋणीलाई मुलुकी ऐन दण्डसजायको ४२ नं. र लेनदेन व्यवहारको १९ नं. बमोजिम बढीमा १ वर्षसम्म मात्र वित्तीय संस्था आफैले सिधा भरी थुनाउन पाउने व्यवस्था छ । त्यसरी थुनाउँदा मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १९ नंं अनुसार दिनको रू. २५ का दरले बढीमा १ वर्षसम्म मात्र थुनाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यसरी कानूनमा लेनदेनका लागि कम कैदको व्यवस्था हुनु भनेको रीतपूर्वक ऋण लिनु र तिर्न नसकी गरीब हुनु फौजदारी अपराध होइन भन्ने सिद्धान्तका आधारमा कम सजायको व्यवस्था गरिएको हो । तर, यदि कर्जा प्रवाह रीतपूर्वक भएको छैन, धितो ढाँटिएको छ, जुन कामका लागि कर्जा लिइएको हो, सो काम गरिएको छैन भने त्यस्तो कार्य बैङ्किङ कसुरसम्बन्धी अपराधअन्तर्गत पर्छ । त्यसमा भने अन्य सामान्य क्षेत्राधिकार भएको अदालतबाट बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अनुसार बिगो भराई बिगोअनुसारको जरीवाना गराई ५ वर्षसम्म कैद गर्ने व्यवस्था बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ ले व्यवस्था गरेको छ । तर उक्त व्यवस्थाअन्तर्गतको क्षेत्राधिकार ऋण असुली न्यायाधिकरणमा रहेको छैन । यसरी हेर्दा कर्जा कारोबार गर्नु अपराध होइन भन्ने सिद्धान्तको आधारमा कैद कम गरिएको हो र यो ठीकै पनि हो ।
कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई बैङ्कले कालोसूचीमा राख्ने नियम कस्तो लाग्छ ?
कालोसूची भनेको वित्तीय कारोबार गर्नेहरूका लागि एउटा ठूलो बाधा हो । किनकि कालोसूचीमा रहेको व्यक्तिले कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कारोबार गर्न पाउँदैन । त्यस अवस्थामा त्यस्तो व्यक्ति÷कम्पनी÷कम्पनीका सञ्चालक वित्तीय हिसाबले शून्य अवस्थामा आएको मानिन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ११ अनुसार भाखाभित्र वित्तीय संस्थाको साँवाब्याज नतिरेमा त्यस्तो ऋणीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कालो सूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडमा लेखी पठाउनुपर्नेछ । त्यसैका आधारमा समयमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको साँवा ब्याज नतिर्ने व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएकोे पाइन्छ ।
ऋण असुलीका दृष्टिले कालोसूचीमा राख्नु नै असुलीको पर्याप्त आधार मान्न मिल्दैन । यो त केवल एउटा ऋणीलाई कर्जा तिरेनौ भने तिम्रा सबै आर्थिक बाटा बन्द हुनेछन् भनी सचेत गराउने उपाय मात्र हो । जब आर्थिक बाटा बन्द हुन्छन्, त्यस अवस्थामा ऋणीबाट ऋण सहज रूपमा उठ्न सक्ने अवस्था झनै न्यून भएर जान्छ । त्यसैले ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने अवस्थामा नआउनु नै वित्तीय संस्थाको सफलता हो । यदि ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो दुवैतर्फ हानि भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कालोसूचीमा रहने ऋणीलाई सामाजिक र अन्य कानूनी कारबाहीमा पनि असर पर्ने व्यवस्था भएको पाइँदैन । कम्पनी गठन गर्दा संस्थापक शेयरधनी हुन कालोसूचीमा नरहेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको पाइन्छ । कालोसूचीमा राख्नु भनेको वित्तीय कारोबार गर्न अयोग्य व्यक्ति भनेर सूचीकृत गर्नेसम्मको कार्य हो । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अन्य सङ्घसंस्था तथा राजनीतिक दलहरूको सदस्यता लिन नपाउनेसम्मको व्यवस्था हुनु आवश्यक देखिन्छ । त्यसैले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा रहेको व्यवस्थालाई आमूल परिवर्तन गर्दै बृहत्तर असर हुने गरी कालोसूचीसम्बन्धी कानून बन्नु जरुरी देखिन्छ । यसरी कडाइ गर्नुपर्ने कारण के हो भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू सर्वसाधारण जनताले राखेको निक्षेपबाट सञ्चालन हुने हुन् । यदि बैङ्क डुबेमा बैङ्कका शेयरधनीहरू मात्र डुब्ने नभई बैङ्कलाई विश्वास गरी रकम जम्मा गर्ने सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने, उनीहरूको निक्षेप डुब्ने भएकाले बैङ्कको कर्जा असुलीमा कडाइ गर्नुपरेको हो ।
अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ ?
नेपालको बैङ्किङ कानून असुलीको अधिकारका दृष्टिले विश्वमा रहेका बैङ्किङ कानूनभन्दा अत्यन्त शक्तिशाली देखिन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ ले ऋणीले कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित शर्त, कबुलियतको पालना नगरेमा वा करारको भाखाभित्र कर्जा र त्यसमा लागेको ब्याज, क्षतिपूर्ति नतिरेमा वा जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो सो प्रयोजनमा नलगाई कर्जा दुरुपयोग गरिएको देखिएमा कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षणलाई लीलाम विक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवाब्याज असुल गर्न सक्ने अधिकार वित्तीय संस्थाहरूलाई दिएको छ । यस प्रकारको अधिकार विश्वका अन्य राष्ट्रले वित्तीय संस्थालाई दिएको पाइँदैन । भारतको उदाहरण हेर्ने हो भने बैङ्कहरूले धितो लीलाम गर्नुअघि ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट स्वीकृति लिएर वा न्यायाधिकरणमार्फत धितो लीलाम गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ । तर, नेपालमा ऋणीले लेखिदिएको धितो सोझै लीलाम विक्री वा अन्य व्यवस्था गरी आफ्नो कर्जा असुल गर्ने अधिकार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कानूनले दिएको छ । यस अवस्थामा नेपालका वित्तीय संस्थाहरू कानूनी हिसाबले अत्यन्तै शक्तिशाली छन् । तर, ऋणी र बैङ्कका कर्मचारीको कमीकमजोरीकै कारण बैङ्कको कर्जा कमजोर या डुब्न जाने देखिन्छ । अन्यथा त्यत्रो अधिकार पाएका बैङ्कहरूको कर्जा सामान्यतया डुब्न हुँदैनथ्यो ।
भेषराज कोइराला, स्रेस्तेदार, ऋण असुली न्यायाधिकरण
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा सरल तथा सङ्क्षिप्त कार्यविधिमार्फत टुङ्गो लगाई शीघ्रातिशीघ्र कर्जा असुली गर्ने प्रयोजनका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा ४ अनुसार २०६० सालमा यस न्यायाधिकरणको स्थापना भई कार्य सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
न्यायाधिकरणको स्थापना तथा कार्यसञ्चालनका लागि विशेष कानूनका रूपमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ तथा नियमावली, २०५९ निर्माण भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । न्यायाधिकरणले नेपालभरका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको उजुरी निवेदन सुनी कर्जा असुलउपर गराइदिने अभिभारासमेत लिएको छ ।
यो ऐनले दुई तहको न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरेको छ । मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्न ऋण असुली न्यायाधिकरण रहेको छ भने त्यसउपरको पुनरावेदन सुन्न ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरण रहेको छ । तल्लो तहको न्यायाधिकरणमा उजुरी सुन्ने (जुरी) विशेषज्ञका रूपमा कानून, लेखा र बैङ्किङ गरी तीन सदस्यीय इजलाश गठन गरिएको छ । जहाँ कानून सदस्यले अध्यक्षका रूपमा र अन्यले सदस्यका रूपमा न्यायिक भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । यसबाट ऐनले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीमा विशेषज्ञका साथै विशिष्ट क्षमताको भरपूर उपयोग गरेको देखिन्छ । ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरण एक तहको पुनरावेदकीय अधिकार भएको निकाय हो, जहाँ एक सदस्यीय इजलाशको परिकल्पना गरिएको छ ।
न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकार :
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा ३ अनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैङ्कहरू, ‘ख’ वर्गका विकास बैङ्कहरू र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूको साँवा रू. ५ लाख वा सोभन्दा माथिको ऋण असुली सम्बन्धमा उजुरी निवेदन लिई कारवाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार न्यायाधिकरणमा रहेको छ । ऐनको दफा १५ अनुसार भाखा नाघेको मितिले ४ वर्षभित्र ऋण असुलउपर गरिपाऊँ भनी उजुरी निवेदन दिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । प्रस्तुत ऐनले प्रशासनिक कामकारबाहीका लागि एक जना स्रेस्तेदार र फैसला कार्यान्वयनका लागि ऋण असुली अधिकृत रहने व्यवस्था गरेको छ ।
असुलीको अवस्था :
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा उठाइदिने मुख्य लक्ष्य लिएर स्थापना भएको न्यायाधिकरणको औचित्य खराब कर्जा असुलीको अवस्थाले पुष्टि गर्ने हो । हालसम्मको असुलीको तथ्याङ्क हेर्दा २०७३/७४ को असार मसान्तसम्ममा यस न्यायाधिकरणबाट १७ अर्ब १८ करोड ८८ लाख १० हजार ९ सय १६ रुपैयाँ ३७ पैसा खराब कर्जा असुली भएको देखिन्छ ।
उक्त तथ्याङ्कको अध्ययनबाट असुलीको कार्य पूर्ण रूपमा सन्तोषजनक नभए तापनि निराश नै हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले धितोका रूपमा रहेका वस्तुका बारेमा पूर्ण रूपमा सूचना दिन नसक्नुको साथै धितो नै देखाउन नसक्नुले कार्यान्वयन पक्ष केही फितलो बन्न पुगेको हो । त्यसबाहेक भौतिक स्रोतसाधन, जनप्रतिनिधिको उपलब्धता, मूल्याङ्कनमा हुने अस्पष्टताजस्ता कारणले पनि असुली प्रक्रिया केही प्रभावित भएको छ । २०५८ सालमा ऐन जारी भई २०६० साल साउन १ गते स्थापित न्यायाधिकरणले १४ वर्ष पार गरिसकेको छ । यस अवधिको अनुभवका आधारमा ऋण असुलीसम्बन्धी कार्यलाई अरू बढी प्रभावकारी बनाउन समयसापेक्षरूपमा ऐन र नियममा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस भएको छ ।
धितो कैफियतको निराकरण
विभागीय प्रमुख, ऋण असुली विभाग
‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८’ ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दाहरू छिटोछरितो ढङ्गबाट कारबाही तथा किनारा गरी ऋणीबाट लिनुपर्ने ऋणको साँवा तथा ब्याज रकम असुलउपर गर्ने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले बनाइएको हो । उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि माथि उल्लिखित उद्देश्यअनुरूपका कार्यहरू समय र परिस्थितिअनुसार क्रमबद्ध रूपमा सुधार हुँदै आएका छन् । उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएका कानूनी प्रावधानहरू समयसापेक्ष नै छन् । तर, कार्यान्वयनको क्रममा समय, परिस्थिति तथा व्यक्तिनिष्ठ प्रवृत्तिले गर्दा केही कमीकमजोरी रहनु स्वाभाविक नै हो ।
कर्जा र धितोको सम्बन्ध अत्यन्त गहन रहन्छ । कर्जा लिँदा दिएको धितो पछि कर्जा खराब हुँदा त्यसबाट असुलउपर गर्नुपर्ने अवस्थामा फरक पर्न सक्छ । त्यसैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७३/०७/०८ मा भएको फैसलाबाट त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई आदेश भएबमोजिम उक्त बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई मिति २०७३/१२/०६ मा निर्देशन दिइसकेकै छ ।
आंशिक धितो भएको, धितो नै नभएको र ऋणी नै फरार भएको अवस्थामा कसरी, कहिलेसम्म ऋण असुली गर्ने भन्ने विषय अस्पष्ट तथा अप्ठ्यारो परिस्थिति रहेको अवस्था छ । यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले ऐनमा केही परिमार्जन गर्नु परे गर्न र नयाँ ऐनको आवश्यकता भए ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । त्यसका लागि आजैबाट कार्य थालनी गर्न जरुरी छ ।